Inona avy ireo fitsipiky ny PCB fisehon'ny ao amin'ny fanjakana? - China Fastpcba Teknolojia
Inona avy ireo fitsipiky ny PCB fisehon'ny ao amin'ny fanjakana?
PCB birao wiring dia iray amin'ireo zava-dehibe izay tsy mihazakazaka. PCB wiring Mifototra amin'ny elektrika schematics sy ny latabatra sy ny tariby ilaina tariby sakany, ary Heba fisehon'ny pirinty tariby, wiring amin'ny ankapobeny dia tokony hanaraka ny fitsipika manaraka ireto:
1. Ny faritry ny fahafaham-po ny fepetra ho an'ny fampiasana, ny filaharan'ny fifidianana ny wiring no fomba tokana sosona → → multilayer sosona voalohany, izany hoe ny wiring azo notsorina.
2. Ny famantarana eo amin'ny mitovy sosona ny PCB miova tari-dalana amin'ny birao misy fiakarana kely na malamalama tetezamita, sy ny nipoaka ny curvature dia tsara kokoa, mba tsy mifantoka saha herinaratra, famantarana fandinihana sy ny fanampiny impedance.
3. Ny fisehon'ny wiring fifandraisana eo amin'ny roa dia toy fohy fisaka sy mivelatra araka izay azo atao, ary saro-pady famantarana sy ny famantarana kely any aloha. Mba hampihenana ny fahatarana sy ny fitsabahan'ny kely famantarana. Ny tsipika grounding ampinga tokony halevina akaikin'ny fahan'ny tsipika ny Analog faritra; ny fisehon'ny sosona mitovy mpitarika dia tokony ho zaraina mitovy. Ny conductive faritra eo amin'ny tariby tsirairay dia tokony ho somary mandanjalanja mba tsy warpage birao.
4. Digital faritra sy ny faritra Analog dia tokony hisaraka amin'ny wiring mba tsy hanelingelina ny hafa.
5. Raha ny faritra Pcba singa eo amin'ny solaitrabe ireo ka mafy orina sady mifandray amin'ny famatsiana ny fahefana, ny soritra dia tokony ho toy fohy araka izay azo atao, ary araka izay akaiky araka izay azo atao mba hampihenana ny anatiny fanoherana ny PCB birao.
6. Ny halavan'ny ny I / O andalana ny haingam-pandeha faritra, toy ny maro I / O tsipika sy ny fanamafisam-peo sy voalanjalanja Differential fanamafisam-peo, dia tokony hitovy. Mba hisorohana ny fanemorana na ny dingana ilaina fanovana.
7. Ny soritra eo amin'ny tsirairay multilayer sosona ny birao tokony ho perpendicular amin'izy samy izy mba hampihenana ny efa voavitrana. Aza fampifanarahana sy ny fifandanjana ny ambony sy ny ambany sosona.
8. Raha ny pad dia mifandray amin'ny conductive faritra ny faritra lehibe sy kely, dia tokony ho Voaro amin'ny manify tariby tamin'ny halavan'ny tsy latsaky ny 0.5mm. Ny sakan'ny manify tariby tsy tokony ho latsaky ny 0.13mm.
9. Ny tariby akaiky indrindra ho an-tsisin'ny faritra vita pirinty birao tokony ho lehibe noho 5mm avy any an-tsisin'ny faritra vita pirinty birao. Tariby ny tany dia mety ho akaiky ny lelan-birao, raha ilaina. Raha misy mpitari-dalana rail dia ho asisika mandritra ny fanodinana ny birao faritra vita pirinty, ny elanelana misy eo amin'ny tariby sy ny birao dia tsy maintsy, fara fahakeliny, ho lehibe noho ny halalin 'ny mpitari-dalana lalamby.
FASTPCBA Technology Co., Ltd dia mpanamboatra PCB matihanina ao Shina, Shenzhen. Amin'ny 14 taona ny fampandrosoana, FASPCBA mivadika ho iray kilasy voalohany mpanamboatra ny HDI PCB, miaraka amin'ny famokarana fahaizany 35,000 toradroa meters.If tianao ny hianatra bebe kokoa PCB , dia mifandraisa: pcba06@pcb-smt.net